Ndozi na ndụmọdụ maka FSX ntọala cfg
Ndozi na ndụmọdụ maka FSX ntọala cfg 2 afọ 4 ọnwa gara aga #973
Maka simmers ọhụrụ ka m tinyere ọnụ ihe ụfọdụ nke nwere ike ime ka ị na-efe efe ọbụna karị. Nke mbụ
akụkụ ga-enye gị ihe ndozi dị mkpa ịbanye na FSX. Y’oburu FSX Ntugharị Steam ị gaghị eme nkebi nke mbụ a.
(A na-echere ndozi ndị a maka usoro na quad core ma ọ bụ ka mma CPU na nke kachasị nke 4 gigs RAM ma ọ bụ karịa)
N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, usoro usoro ihe ugbu a.
Nkebi nke a: mgbanwe ndị a maara na mkpa
Mbụ anyị kwesịrị ịnweta isi FSX hazie faịlụ ( Jide n'aka na i setịpụrụ windo igosi faịlụ na nchekwa dịnụ )
Họrọ Mmalite / Kọmputa / C: / Ndị ọrụ / Aha gị ma ọ bụ aha kọmputa / Appdata / Ngagharị / Microsoft / FSX
Ozugbo ị mepee FSX folda chọta nke fsx.cfg faịlụ ma mepee ya nye gị ntinye ederede. Ọ ga-adị ka nke a:
InfoBrakesEnable = Eziokwu
InfoParkingBrakesEnable = Eziokwu
InfoPauseEnable = Ezi
InfoSlewEnable = Ezi
InfoStallEnable = Ezi
InfoOverspeedEnable = Eziokwu
WideViewAspect = Ezi
Ihe Njirimara = Ogologo, Helicopter
SimObjectPaths.3 = SimObjects \_ Ụgbọ mmiri
SimObjectPaths.4 = SimObjects Animals
Ejiri elu = 1
Ebe = 421,0,1740,1036, \_\_. \_ DISPLAY1
Ọnọdụ = 1920x1080x32
Njikwa_Default = Ụtọ
Controls_Current = Ụtọ
Ogologo = 1,2
Elu = 1,3
Isi ihe = 1,4
Lee_Self = 1
Ọnọdụ = C: \_ Ọrụ \_ Darrin \_ Documents \_ Flight Simulator X Files 737
GosiAllACPaintSchemes = 1
HọrọAircraftManufacturer = niile
HọrọAircraftPublisher = niile
HọrọAircraftType = niile
JiriPilotVoice = 1
GosiLabels = 1
GosiUserLabel = 0
GosiLabelManufacturer = 1
GosiLabelModel = 1
GosiLabelTailNumber = 0
GosiLabelDistance = 1
GosiLabelAltitude = 1
GosiLabelAirline = 0
GosiLabelAirlineAndFlightNumber = 0
GosiLabelFlightPlan = 0
GosiLabelContainerId = 0
GosiLabelAirspeed = 0
GosiLabelHeading = 0
UnlimitedFuel = Ụgha
EziAirspeed = Ezi
AutoCoord = Eziokwu
RealMixture = Ụgha
StressDamage = Eziokwu
GEffect = Ezi
Akwụkwọ ntuziaka = Ụgha
GyroDrift = Ụgha
CrashWithDyn = Ụgha
CrashDetection = Ezi
AutoTrim = Ụgha
AllowEngineDamage = Ụgha
[Ihe ndị dị na peeji]
Njikwa = Idaho
OZI = Ekeji Twin
D: \_FSX\_ GAUGES \_ FDSFX_06_turbulence na.GAU.bcinqoaarbwutthknnhtqauewekaekubiibzcncu = 2
D: \_FSX\_ GAUGES \_ FDSFX_08_gate ọpụpụ.GAU.lchaaiubzzoorikqtqizriolcetkrqbwtqqcniba = 2
D: \_FSX\_ GAUGES \_ FDSFX_10_safety ozi.GAU.lchaaiubzzoorikqtqizriolcetkrqbwtqqcniba = 2
D: \_FSX\_ GAUGES \_ FDSFX_17_begin sitere.GAU.lchaaiubzzoorikqtqizriolcetkrqbwtqqcniba = 2
D: \_FSX\_ GAUGES \_ FDSFX_18_on bịaruo nso.GAU.lchaaiubzzoorikqtqizriolcetkrqbwtqqcniba = 2
D: \_FSX\_ GAUGES \_ FDSFX_20_taxi ruo n'ọnụ ụzọ.GAU.lchaaiubzzoorikqtqizriolcetkrqbwtqqcniba = 2
D: \_FSX\_ GAUGES \_ FDSFX_21_gate mbata.GAU.lchaaiubzzoorikqtqizriolcetkrqbwtqqcniba = 2
D: \_FSX\_ GAUGES \_ brakes_Sound.GAU.aqrreuwiutqzttebzkrqncewurhnactlnwktwrbi = 2
Anyị ga-amalite na ngalaba ngosi. Ọ bụrụ na ị na-eji LCD Monitor ma ọ bụ nchekwa ọ bụla, anyị ga-achọ ịgbanwe ihe ndị na-esonụ n'ime [Ngosipụta] Nkebi.
WideViewAspect = Ụgha
Gbanwee Ụgha n'Eziokwu
Na ukwu nke [Ndịna] ngalaba tinye ihe ndị a:
HIGHMEMFIX = 1 bụ ihe kachasị mkpa na ọ na-enye ohere FSX to run up tp 4 gig on VAS ( Virtual Address Space ) If you are using add-on scenery and aircraft or have
autogen na ndị ọzọ sliders siri ike. Nke a gbakwunyere akara na faịlụ config gị ga - egbochi igbochi OOM ( na-emeghị ihe ncheta ) Kedu nke juru ebe niile FSX. Steam
Mbido na - agụnye mgbanwe a maka gị na ndabara.
Ana m akwado gị ibudata Nhazi Explorer at www.sysinternals.com . Ngwaọrụ a ga - enyere gị aka nyochaa ma ghọta njikọ VAS mgbe ị na - agba ọsọ
na woka wo ho FSX na-ejikwa akụ usoro gị. Ọ ga-edepụtara ya naanị VS ( ebe nchekwa ) Ị ga-ahụkwa CPU na RAM nke ọma.
Ghọta usoro a ga - enyere gị aka ịtọlite FSX maka ogologo ụgbọ elu na-enweghị egwu ahụ OOM na-eme mgbe ụgbọ elu 10 elekere na ụzọ ikpeazụ gị.
Anyị niile ga-achọsi ike ịhụ ụdị 64 bit nke simulator ụgbọ elu ma ruo mgbe 4 gigs nke VAS kacha mma na-aga ime.
Ọzọkwa n'okpuru b] GRAPHICS [/ b ngalaba bụ akara na-esonụ:
Gbanwee na 2048 ma ọ bụ 4096
Site na ndabara FSX atọrọ ka 1024 dị ka ọkọlọtọ nke abụghị Nkọwapụta Elu. Gaghị enwe ike ịnụ ụtọ HD ndịna-emeputa na nyocha ihuenyo gị. Aircraftfọdụ ụgbọ elu gị
nbudata (payware) agaghị egosi na o nwere ike ma ọ bụrụ na ị nwere akara a setịpụrụ na 4096. Ugbua, a na-edozi Steam Edition na 4096 site na ndabara. Ị nwere ike
gbalikwa 2048 nke ka HD. Ọ ga-adabere na gị fps (okpokolo agba kwa nke abụọ) Mara: Ọ bụrụ n’ịgbanwe ntọala gị (Sliders) na FSX willkwesịrị ịtọgharịa ahịrị a
dịka ọ ga-alaghachi na 1024 na-agafe.
Ihe ndị a dị n’elu bụ iwu izugbe. Ikwesiri ibido FSX mgbe imechara 3 dị elu wee mee njem dị mkpụmkpụ na mpaghara ị na-efekarị. Ama m na ị ga-ahụ a
Nkebi nke 2: Nzube ndị na-ahụ ọkụ.
Ana m akwado mgbe mgbanwe nke ọ bụla na-agba FSX yabụ ọ bụrụ n’inwee nsogbu na fps ị nwere ike mechie mmemme ahụ ma tọgharịa ahịrị wee laghachi na ndabara. N'ezie
dabere na sistemụ ị na-agba FSX na. Enwere m ihe nhazi 8 Core nke nwere kaadị 2 elu def graphic graph na-agba ọsọ na oku na 16 gig nke RAM arụmọrụ dị elu.
Ihe na-esonụ bụ na www.simforums.com/forums/new-twea...25507.html
Tweak #1 - Nkebi ụda nsị
Iji belata ihe kpatara nsogbu a, Microsoft arụghachila ọrụ etu onye na-ahụ maka ụgbọelu Flight Simulator X si eleba anya n'ọrụ ọrụ na FSX. Ugbu a ọtụtụ ihe ndị ọzọ CPU bụ
na-etinye aka na ntinye data ntinye, gụnyere ala textures, na-akwụ ụgwọ ọnụ ọgụgụ dị ala. Echere m na mgbanwe a na-edozi nke a
ọ bụ ezie na ihe nkedo dị mma ka nwere ike na-akpata n'azụ ụda dị ala (ihe na-erughị 10 fps) ma ọ bụ na ọsọsọ ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ (karịa 600 akara). Enwere
ọtụtụ ụzọ ị ga-esi edozi oge CPU oge FS na-etinye aka na ebe a na-achọgharị na textures. Ụzọ kachasị mfe bụ iji setịpụ ọnyà elebara anya na uru gị
igwe nwere ike imezu mgbe nile. Ala ị na-edozi ihe mmịfe ahụ, oge kaadị CPU na-agbapụ site na nsụgharị na nchịkọta data. Ihe ọzọ ị nwere ike ime bụ imezi ya
na-eso agbanwe agbanwe n’ime FSX.CFG:
FIBER_FRAME_TIME_FRACTION na-ekpebi oge kachasị elu nke oge ọ bụla na etiti anyị ga-agba ọsọ na-arụ ọrụ fiber na eri isi. Anyị na-atụ oge ọ ga - ewe iji mee ka ọ dị mfe ma nyeghachi ma mezie oge ahụ site na FIBER_FRAME_TIME_FRACTION iji chọpụta oge ị ga - agba ọsọ. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na o jiri 10 milliseconds iji dozie ma nyeghachi ya na FIBER_FRAME_TIME_FRACTION na 0.33 ndabara, mgbe ahụ, anyị ga-ekwe ka eriri ahụ na eri mbụ ga - agba ọsọ ruo 10 * 0.33 = 3.3 milliseconds. Maka ihe nha nke 1.0 na 2.0, oge e nyere ụdọ ga-abụ 10 milliseconds na 20 milliseconds, n'otu n'otu.
[n = 0.01 - 0.99] Maka Quad isi ma ọ bụ usoro dị mma gbalịrị 0.70
Maka igwe akụrụngwa dị iche iche ekwuola na ọ dịghị mkpa ihe dị n'elu ma ọ bụ ya mere ndabara bụ 0.33. Agbalịrị m ya n'agbanyeghị na achọpụtara ya na enyere m aka. Usoro ọ bụla dị iche na ngwakọta ngwanrọ na ngwanrọ. Yabụ ị ga-ejikwa ntọala rụọ ọrụ kacha mma na sistemụ nrụọrụ gị. Ọtụtụ ihe metụtara ya. Ọ dị m ka ya bụrụ na m nwere ike ikwu na enwere otu akwụkwọ dabara na ngwọta niile, mana enweghị. Ọ bụrụ na ị na-enwe nsogbu na FPS (okpokolo na nke abụọ) na sistemụ gị ugbu a tupu ịmalite tweaking, ana m atụ aro ka ị dozie nsogbu ahụ nke mbụ site na ịtọbe sliders na mpaghara igwe gị na-arụ ọrụ mgbe niile ma debe ya ebe ahụ. Nyochaa igwe gị n’elu ihe nd ị dị oke mma ma nwaa idobe 20 fps. Nwere ike ịtọ fps limiter ka akparaghị ókè na-agba ọsọ FSX Site na ya oghere, tinyezie ya ọzọ na 30fps (ọkara ọkara ọnụego ahụ ma ọ bụ nyochaa ọnụọgụ ume) Ọ bụrụ na ị na-eche maka ịbụ ihe siri ike simmer wee tinye kọmputa naanị maka simulator ụgbọ elu bụ ụzọ ị ga-aga. Ga - echekwa ọtụtụ ihe $$$ site n'iwuli usoro nke gị.
na b) IKE [/ b ngalaba bụ ihe ndị a:
Gbanwee na 6.500000 ruo 7.500000
Ntọala dị n'elu na-ekpebi ịdị anya FSX na-adọpụta ebe ahụ (ịdị nkọ) ma rụọ ọrụ na TIME_FRAME_TIME_FRACTION.
Ịgbanwe akara a ga-amụbawanye anya n'ihu ụgbọelu ahụ. (Rịba ama na ọ ga-abawanye njirimara VAS gị ntakịrị)
Na Ngalaba [Mpaghara]
Jide n'aka na a debere nke a na DETAIL_TEXTURE = 1
Nke a ga-abụrụ uru ndị na-ahụ maka ihe osise foto ozugbo. Ị ga-ahụ akụkụ dị mma karị na ahihia na ala dị elu na mmụba dị mma n'ozuzu anya swiiti anya na ikuku na-achọ ala.
Nkebi nke 3: Inyere aka wepu ibu a FSX. You nwere ike inyere aka eserese gị site na ịnwe kaadị HD gị na-arụ ụfọdụ ọrụ nke CPU gị.
Lee ụfọdụ vidiyo na-enye aka:
Ihe na-esote vidio bụ Flight Sim Addic na ọ maara ọtụtụ ndozi. Echere m na ọ bụkwa onye òtù REX Team.
M na-eji Megascenery na Blue Sky na otutu ya. Nke a kpatara m ji nwee 2 TB HD raara nye FSX. Ọ bụ ezie na achọghị m ichegbu onwe m banyere autogen, ịkọ ihe nkiri nwere ike ịbụ ihe ịma aka na ụgbọ elu dị ala mgbe ọ na-abịa nkọ. Ejiri m tweaks ndị ahụ dị n'elu melite nkọ na 500 ft ya mere na-eme ka ọnụnọ m na ebe m ga-agbacha dị nkọ.
Uru kachasị dị na foto dị mma na enweghị autogen bụ ojiji VAS na-arụ ọrụ nke ọma yana 10 fps na-abawanye na ịghara ịkọwa ihe ngosi ụgbọ ala ebe ị na-efe. A ga-enwe ndị na-eme mkpọtụ mgbe niile na-achọkwu ọtụtụ ihe mana a ga-enwe ọrụ mmezi iji gbochie mkpọsa mmemme ruo mgbe ewepụtara ezi ikpo okwu 64. Njikwa amamihe na nghọta ọma nke igwe gị ga-arụ ọrụ dị ukwuu FSX ọmarịcha ikpo okwu.
Enwere m olileanya na nke a ga - enyere gị aka na arụmọrụ ma mee FSX ọzọ nke mmemme ọgbara ọhụrụ.
Oge ike page: 0.174 sekọnd